Guzosie ike na 1976 ya na Xuzhou Liangshankou Vehicle Factory dị ka onye bụbu ụlọ ọrụ, Huaihai Holding Group bụ ụlọ ọrụ mini kachasị arụpụta ọrụ na ngalaba.
Ndebanye aha nke "Huaihai" Brand gosipụtara mmepe mmepe nke Minilọ Ọrụ Oche Chinesegbọala Obere China
Mbido nke Huaihai Holding Group, Jiangsu Province
Ntọala nke mmekọ, Jlọ ọrụ Jiangsu Zongshen. Site na itinye ego dị iche iche nke dollars 15.1 nde dollar iji nweta mmepe 100% na ma uru ma mmepụta, n'ihe dịka ọrụ ebube
Ejiri ulo oru nke Jiangsu Zongshen nke abuo $ 30.3 site na ndi otu a ka ha nweta 30,0000 na –emeputa ikike nke ugboala ma meputa ikike ulo oru di elu n’ime ulo oru.
Site n'ahịa ahịa dị elu n'ahịa anụ ụlọ, Jlọ ọrụ Jiangsu Zongshen ghọrọ onye na-emepụta ọgba tum tum kachasị na China.
Site na njeri ego dị nde dollar 83.41 na-enye aka na njeri nke 3 nke Jiangsu Zongshen, e wuru ntọala ntuli aka maka imezu ikike nrụpụta nde na ụlọ ọrụ No.1
Ahaziri dị ka Levellọ Ọrụ Mba nke Mba, ndị “Huaihai” ghọrọ onye isi na ọkọlọtọ ụlọ ọrụ.
N'iburu ego ruru nde dọla iri na ise na nde dọla iri abụọ na isii na ụlọ ọrụ Jiangsu Zongshen na ụlọ ọrụ teknụzụ na-ekpuchi 140000 square, ụlọ ọrụ ahụ nwetara atụmatụ ọzọ dị elu na ụlọ ọrụ a.
E guzobere Jiangsu Zongshen roniclọọrụ elektrọnik & Mechaniki n'okpuru nkwekọrịta mmekọrịta dị n'etiti Huaihai Holding Group na Zongshen Group dị ka ihe dị mkpa ọzọ maka mmepe nke elu.
Ego ruru nde $ 7.583 iji guzobe ụlọ ọrụ Jiangsu Huaihai New Energy Vehicle iji wuo ụlọ ọrụ ọzọ na-eduga na ụlọ ọrụ EV.
E guzobere Companylọ ọrụ Tianjin Zongshen na ＄ 7.583 nde iji mezuo oke atụmatụ dị na ahịa Huaibei, na-ewu ala nnukwu mpaghara mmepụta ụgbọ ala a.
Site na imekọ ihe ọnụ dị mkpa dị n'etiti Huaihai Holding Group na Zongshen Group iji mepụta usoro izizi nke dị na ndịda ọdịda anyanwụ ụlọ ahịa dịka iguzobe Companylọọrụ Vengqing Zongshen ma nweta ọnọdụ mbu na obere ụgbọala na-emepụta ụlọ ọrụ na mpaghara a.
Ndi Huaihai Holding Group tinyekwara nnukwu ego iji nweta ụlọ ọrụ akụrụngwa Navy 4813 mbụ, wee mepụta nnukwu mba na-arụpụta ihe, Huaihai Mechanic & Electronic Technology Co., Ltd, bụ nke gosipụtara mmalite nke ụlọ ọrụ mejupụtara isi ahịa.
E hiwere njikọ mmepe mba ụwa n'ihu atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ na atụmatụ Belt na okporo ụzọ iji mee ka njikọta ahịa si mba ofesi na-agbasa, na-agbasa ngwaahịa ndị na-ere ire ọkụ n'akụkụ ụwa niile iji wulite ezigbo ntọala maka ọganihu na mmepe nke azụmahịa otu.
Ego ruru nde dola iri anọ na ise iji chọta Hongan New Energy Auto Co., Ltd, na-azụlite azụmaahịa dị iche iche site na ụgbọ ala akụ na ụba rue vehiles okomoko, na-eme ka mmepe azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụrụ ọsọ ọsọ na ahụike.
Na 2018, olu mbupụ nke afọ na-abawanye site na 70%, na-eje ozi karịa 70% nke ndị ụwa, na-enye ọkwa mbụ na ụlọ ọrụ.